Belarus Metrosu’na Eskişehir İmzası | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[12 / 11 / 2019] OSB / Törekent Koru Metro လိုင်းအချိန်ဇယားအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုစီစဉ်သလဲ။	06 တူရကီ
[12 / 11 / 2019] Ankara YHT မတော်တဆဖြစ်ရပ်အားဇန်နဝါရီလ 13 တွင်စတင်မည်	06 တူရကီ
[12 / 11 / 2019] မြန်နှုန်းမြင့်အမြန်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေးကိုတိုလိမ့်မည်	06 တူရကီ
[12 / 11 / 2019] Istanbul Airport မှ Hava-Sen ၏ဖော်ပြချက်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 11 / 2019] မီးရထား၏ဖခင်Behiç Erkin 58 သေခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့	26 Eskisehir
[12 / 11 / 2019] Köseköyထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာနရှိစည်းဝေးပွဲတွင်သောင်းနှင့်ချီသောလှည်းများရှိသည်	41 Kocaeli
[12 / 11 / 2019] ရုရှားခရိုင်းမီးရထားပျံသန်းမှုများစတင်ခဲ့သည်	380 ရိုင်း
[12 / 11 / 2019] ဆရာများအတွက်ရထားလက်မှတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် '24 November' လျှော့စျေး	06 တူရကီ
[12 / 11 / 2019] Sapanca Teleferic စီမံကိန်း EIA အစီရင်ခံစာတောင်းဆိုချက်	54 Sakarya
[12 / 11 / 2019] Istanbul နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်း Channel	34 အစ္စတန်ဘူလ်
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 Eskisehirဘီလာရုစ်မက်ထရိုအတွက်Eskişehirလက်မှတ်ထိုးခြင်း
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, 375 ရုစ်, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
Eskişehirစက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ESO) ဥက္ကChairman္ဌ Celalettin Kesikbaş, မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန်YılmazBüyükerşen, ESO ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်Eskişehirစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည်ဘီလာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အဆက်အသွယ်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Minks နှင့် Grodno ၏မြို့တော်၊ Eskişehirကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်ဤတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်သဘောတူညီမှုများနှင့်ကုမ္ပဏီများအကြားနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးညှိနှိုင်းမှုများ (B2B) ကျင်းပခဲ့သည်။
ESO ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကChairman္ဌ Celalettin Kesikbaşသည်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောကြားခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်၏စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အလုပ်အကိုင်များ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့်ကာကွယ်ဆေးများကိုပိုမိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ရုရှားနှင့်ယခင်ရုရှားသမ္မတနိုင်ငံများသို့တင်ပို့မှုကိုအကောက်ခွန်မဲ့နှင့်မြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ရှိထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ ဘီလာရုစ်တွင်တည်ရှိသောလွတ်လပ်သောဇုန်တွင်ရုရှားပထဝီဝင်တစ်ခုလုံးအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုစုံစမ်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားအသိပေးနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်မှုအခွင့်အလမ်းများ၊ မက်လုံးများ၊ အထောက်အပံ့များ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ B2B အင်တာဗျူးများ။ "
ESO ဥက္ကPresident္ဌKesikbaşမှ ESO နှင့်ဘီလာရုစ်ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်စေမည့်အစီအစဉ်များကိုအလုပ်ရှုပ်နေသည့်အစီအစဉ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး၊ အရေးကြီးသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Eskisehir ကုမ္ပဏီ Albayrak Machinery, Minks စည်ပင်သာယာသည်မက်ထရိုတွင်လေးနက်သောအလုပ်များလုပ်လိမ့်မည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်လက်မှတ်ထိုးပွဲကိုကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့သည်နေရာတိုင်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိကြောင်းပြသရန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘီလာရုစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်ကိုမက်ထရိုတွင်လက်မှတ်ထိုးလိမ့်မည်။
ကီဆစ်ဘာဘာသည်အစည်းအဝေးများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ ဘီလာရုစ်သံရုံး၊ ဘီလာရုစ်စက်မှုလက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန၊ ဘီလာရုစ်စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း၊ မင့်ခ်စည်ပင်သာယာ၊ ဒီအတောအတွင်းမှာငါတို့ကုမ္ပဏီတွေဟာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေလည်းလုပ်တယ်” ဟုသူကပြောသည်။
Kesikbaşကသူတို့၏ဘီလာရုစ်သို့အလည်အပတ်ခရီးသည်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့သစ်များအတွက်တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်ဟု ESO မှပြောကြားသည်မှာ ESO သည်လတ်တလောတိုင်းပြည်၏ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတူ ဦး တည်ရာနိုင်ငံများသို့ဆက်လက်ခရီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Kesikbaşက“ မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဏ္ sector အစုအဖွဲ့ ၀ င်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖိတ်ကြားမှာပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့တော်စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တိုးတက်ရန်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတမစ္စတာယေးလ်မမ်ဘူယူကာရှန်သည်ဘီလာရုစ်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဆက်အသွယ်များ၌လည်းသူနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သမ္မတကိုသူထည့်ဝင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ESO ဥက္ကPresident္ဌ Celalettin Kesikbaşနှင့်မြို့တော်ဝန် Yilmaz Buyukerşenတို့မှ ESO ၏စီးပွားရေးခရီးစဉ်သည်မန်နေဂျာများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမားများSühaÖzbay၊ Sinan Özeçoğlu၊ အီဗရန်စဟင်၊ ဘူလန့်ကွင်စင်း၊
ခကျြခကျြစက်ခေါင်းထုတ်လုပ်သူဘီလာရုမီးရထားများအတွက် CZ Loko စုစုပေါင်း 20 ဒီဇယ်စက်ခေါင်းထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ် 13 / 11 / 2012 Two-ရိုး 20 1520 နှင့်အတူမီးရထားသန်းတန်ဖိုးရှိ€ xnumxmm gauge ဒီဇယ်ခေါငျးထောက်ပံ့ဖို့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာချုပ်ဖြင့်ဘီလာရုစ်မီးရထား၊ Caterpillar C20 အင်ဂျင်၊
ရုရှား, ဘီလာရုစ်နှင့်ကာဇက်စတန်ယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းစတင်နေသည် 16 / 11 / 2012 ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်နှင့်ကာဇက်စတန်အစိုးရများအကြားယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ (UTLC) တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုယခုနှစ်ကုန်တွင်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်။ ရုရှားမီးရထား၊ Temir Zholy နှင့်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကမေလ 2012 တွင်
ရုရှားနိုင်ငံ-ရုစ်-ကာဇက်စတန်ဖက်စပ်အတွက်ဥရောပ-တရုတ်ကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 09 / 11 / 2013 Avrupa-Çin Konteyner Taşımacılığında Belarus-Rusya-Kazakistan Ortak Girişimi :7 Kasım 2013'de, Rus Demiryolları Başkanı Vladimir Yakunin, Belarus Demiryolları'ndan Vladimir Mikhailyuk, Kazak Demiryolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Askar Mamin tarafından, Avrupa-Çin ortak demiryolu…
ဖုန်းကင်မရာ (ဗီဒီယို) စဉျးစားကွညျ့ဖို့ရုစ်လယ်ထွန်စက်များတွင်မီးရထားပျက်ကျမှု 07 / 01 / 2016 Belarus'ta Trenin Traktöre Çarpması Telefon Kamerasına Yansıdı :Belarus'da bir traktörün motoru soğuk nedeniyle tren rayları üzerinde dondu. Sehir halindeki tren ise duramayarak önünde duran traktörü parçalayarak yoluna devam etti. Belarus'ta…
ဘီလာရုမီးရထား, ပိုလနျကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရထား Pesa ဝယ်ယူ 10 / 02 / 2016 Belarus Demiryolları, Polonyalı Firma Pesa’dan Tren Satın Alıyor: Belarus Demiryolları, Polonyalı tren üreticisi Pojadzy Szynowe Pesa Bydgoszcz (PESA) ile yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Pesa, Belarus Demiryolları için4adet…
မီးရထား၏ဖခင်Behiç Erkin 58 သေခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့
Trabzon ရှိ minibus တွင်လူမည်မျှရှိလိမ့်မည်နည်း။
ကတ္တရာသည် Yedikuyular နှင်းလျှောစီးစင်တာလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
RayHaber 12.11.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဆရာများအတွက်ရထားလက်မှတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် '24 November' လျှော့စျေး
DOF AGV သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ to အသစ်ကိုသက်ရောက်စေလိမ့်မည်
ခကျြခကျြစက်ခေါင်းထုတ်လုပ်သူဘီလာရုမီးရထားများအတွက် CZ Loko စုစုပေါင်း 20 ဒီဇယ်စက်ခေါင်းထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်
ဖုန်းကင်မရာ (ဗီဒီယို) စဉျးစားကွညျ့ဖို့ရုစ်လယ်ထွန်စက်များတွင်မီးရထားပျက်ကျမှု
ဘီလာရုမီးရထား, ပိုလနျကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရထား Pesa ဝယ်ယူ
အဆိုပါပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Consortium ထိုးမြဲလက်မှတ်အတွက်တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားဘူတာ Cengiz Limak Kolin
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (251) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)